I-Zeevou ne-Signable | Ukuhlanganiswa kweZeevou
Ukuhlanganiswa » Kuyaphawuleka
Okusayinwayo nokuhlanganiswa kweZeevou
U-Signable ungumhlinzeki we-e-signature wase-UK osiza ukuthi uthumele amadokhumende abophezele ngokusemthethweni futhi avikelekile ngqo ebhokisini lokungenayo lamakhasimende bese uthola ukusayinda ngogesi. Ukusebenzisa ukusayina kwedijithali kusho ukukhathazeka okuncane ukukhathazeka ngesimo semibhalo yakho futhi ukhululeke ngokwengeziwe ukufaka isiginesha kudokhumenti. Khulisa isilinganiso sakho sokusayina, uthole leso eSignature bese ubuka ukuqoqwa kwemali kusuka kuzinkontileka obungeke uzuze ngaphambili.
Amasiginesha Azibophezelayo Ngokomthetho
Shintsha iqoqo le-ID
Masikwenze Ukuphakamisa Okusindayo!
Shintsha ibhizinisi lakho futhi uthole isikhathi sokukhula.